ရင်ခုန်စရာ ခရစ္စမတ်နဲ့ နှစ်သစ်ကူးအချိန်အခါလေးကို ချစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့ အတူတူဖြတ်သန်းလိုက်ရအောင် – MyStyle Myanmar
ရင်ခုန်စရာ ခရစ္စမတ်နဲ့ နှစ်သစ်ကူးအချိန်အခါလေးကို ချစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့ အတူတူဖြတ်သန်းလိုက်ရအောင်
၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးလထဲကို ရောက်ရှိလာပြီဆိုတော့ ခရစ္စမတ်နဲ့ နှစ်သစ်ကူးအငွေ့အသက်တွေကို စတင်ခံစားလာရပါပြီ။ နှစ်ဟောင်းကိုနှုတ်ဆက် နှစ်သစ်ကိုကြိုဆိုတဲ့ အခုလိုအချိန်လေးဟာ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့အတူတူ ပျော်စရာအမှတ်တရတွေကိုဖန်တီးဖို့ အချိန်အခါကောင်းလေးဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်တာလုံး အလုပ်တွေနဲ့ ပင်ပန်းခဲ့ရသမျှ အခုလိုနှစ်ကူးအကြိုအချိန်လေးမှာ အကောင်းဆုံးအနားယူရင်း နှစ်သစ်ကိုကြိုဆိုဖို့ စဉ်းစားထားတယ်ဆိုရင်တော့ တစ်နေရာထဲမှာပဲပြီးပြည့်စုံတဲ့ ခံစားမှုမျိုးရရှိစေမယ့် ဆီဒိုးနားဟိုတယ်ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ Christmas and New Year Packages အစီအစဉ်လေးတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိုမိုထူးခြားတဲ့ ခရစ္စမတ်နဲ့နှစ်သစ်အကြိုအစီအစဉ်တွေကို ဖန်တီးပေးလေ့ရှိတဲ့ ဆီဒိုးနားဟိုတယ်မှာတော့ ယခု ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် Christmas Magic2Nights Stay Package နဲ့ Twenty Twenty! New Year Eve Package လေးတွေနဲ့အတူ တခြား ထူးထူးခြားခြား အစီအစဉ်လေးတွေကို ဧည့်သည်တော်တွေအတွက် စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ မမေ့နိုင်စရာ ခရစ္စမတ်အမှတ်တရတွေကို ဖန်တီးနိုင်ဖို့ ဒီဇင်ဘာ၂၄ မှ ၂၆ ရက်အတွင်း ၂ ရက်တာ အနားယူနိုင်မယ့် Christmas Magic2Nights Stay Package အစီအစဉ်ရဲ့ ထူးခြားမှုလေးတွေကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
Christmas Magic2Nights Stay Package လေးမှာဆိုရင် ဆီဒိုးနားဟိုတယ်ရဲ့ Garden Wing နဲ့ Inya Wing တို့မှာ အပန်းဖြေအနားယူရမှာဖြစ်ပြီး လူကြီး ၂ ယောက် အသက် ၆ နှစ်အောက် ကလေး ၂ ယောက်အတွက် D’Cuisine မှာ မနက်စာ Buffet သုံးဆောင်ခွင့်, ဒီဇင်ဘာ၂၅ ရက်နေ့မှာလည်း Orzo Italian သို့မဟုတ် D’Cuisine တို့မှာ ညစာသုံးဆောင်ခွင့်ရရှိဦးမှာဖြစ်ပြီး ခရစ္စမတ်ညရဲ့ ထူးထူးခြားခြာအလှဆင်ထားတဲ့ မီးရောင်စုံအောက်မှာ အနားယူအပန်းဖြေရင်း ဓာတ်ဖမ်းနိုင်ဦးမှာပါ။ ဒါ့အပြင် အခန်းထဲအရောက်ပို့ဆောင်ပေးမယ့် ခရစ္စမတ်ကိတ်လှလှလေးကိုလည်း သုံးဆောင်နိုင်မှာဖြစ်သလို Free Wifi အပြင်ရေကူးကန်နဲ့ Gym အသုံးပြုခွင့်တို့ကိုလည်း ရရှိဦးမှာပါ။
မနက် ၁၀ နာရီမတိုင်ခင် check-in ဝင်မယ်ဆိုရင် နောက်တစ်နေ့ နေလည် ၃ နာရီအထိ တည်းခိုခွင့်ရှိတာဆိုတော့ အေးအေးဆေးဆေးအနားယူအပန်းဖြေချင်သူတွေအတွက်တော့ ကွက်တိပါပဲ။ အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ ထူးထူးခြားခြား အစီအစဉ်တွေအားလုံးပါဝင်တဲ့ Package ကိုမှ တစ်ရက်လျှင် MMK 153,450 ++ သို့မဟုတ် US$99++ က စတင်တည်းခိုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Garden Wing Package (Deluxe Poolview) အတွက်က US$ 99++ သို့မဟုတ် MMK 153,450++ နဲ့ Inya Wing Package (Premier Room)အတွက်ကိုတော့ US$ 115++ သို့မဟုတ် MMK 178,250++ ဆိုပြီး ရွေးချယ်စရာတွေလည်းရှိသေးတာဆိုတော့ လာရောက်အနားယူအပန်ဖြေမယ့် ဧည့်သည်တော်တွေ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် Twenty Twenty! New Year Eve Package လေးကတော့ နှစ်သစ်အကြိုအတွက် ဆီဒိုးနားဟိုတယ်ရဲ့ Deluxe Lake View သို့မဟုတ် Premier room မှာ မနက်စာဘူဖေးအပြင် New Year Party လက်မှတ်များနဲ့ တခြားသောထူးခြားတဲ့ အစီအစဉ်များစွာဖြင့် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်နေ့မှ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်နေ့အတွင်း ၂ ရက်တာ အနားယူအပန်းဖြေနိုင်မယ့် အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ မနက်စာ Buffet ကိုတော့ D’Cuisine နဲ့ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်နေ့မှာ အခန်းရောက်ပို့ဆောင်ပေးမယ့် American Breakfast တို့လည်း ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်နေ့မှာ Sparkling Wine တစ်လုံး လက်ဆောင်ရရှိဦးမှာဖြစ်ပြီး ဆီဒိုးနားဟိုတယ်ရဲ့ Sedona Entertainment Arena မှာ ပြုလုပ်မယ့် နှစ်သစ်ကူး Countdown ပါတီအတွက် လက်မှတ်တွေကိုလည်း ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Wifi Free ရေကူးကန်နဲ့ Gym အသုံးပြုခွင့်တွေကိုလည်း ထပ်မံရရှိမှာဖြစ်သလို မနက် ၁၀ နာရီမတိုင်ခင် check-in ဝင်မယ်ဆိုရင် နောက်တစ်နေ့ ညနေ ၃ နာရီအထိ တည်းခိုအနားယူနိုင်မှာပါ။ အဆိုပါ အစီအစဉ်တွေအားလုံးပါဝင်တဲ့ Garden Wing Package (Deluxe Lakeview)ကိုမှ တစ်ရက်လျှင် $120++ (single) နဲ့ $170++ (double) သာကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး Inya Wing Package (Premier Room) အတွက်ကိုတော့ တစ်ရက်လျှင် $132++ (single) နဲ့ $185++ (double) ဖြင့် တည်းခိုအပန်းဖြေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Christmas Magic2Nights Stay Package နဲ့ Twenty Twenty! New Year Eve Package နှစ်ခုစလုံးမှာမှ Inya Wing Package ကို ဝယ်ယူမယ့်သူတွေအတွက် ပိုပြီးထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်အနေနဲ့ အခန်း laundry service , သီးသီးသန့်သန့်အနားယူချင်သူတွေအတွက် အခန်းတွင်း Private Bar နဲ့ မနက် ၁၀ နာရီမတိုင်ခင် check-in ဝင်မယ်ဆိုရင် နောက်တစ်နေ့ ညနေ ၆ နာရီအထိ တည်းခိုအပန်းဖြေခွင့်တွေကို ထပ်မံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Christmas Magic2Nights Stay Package လေးကိုတော့ လက်ရှိအချိန်ကစပြီး ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့မတိုင်ခင်အထိ ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး Twenty Twenty! New Year Eve Package ကိုတော့ အခုချိန်ကစပြီးလာမယ့် ၃၀ ရက်နေ့အထိ ရောင်းချပေးသွားမှာဆိုတော့ ခရစ္စမတ်နှင့် နှစ်သစ်ကူးအကြိုကို အကောင်းဆုံးဖြတ်သန်းချင်သူတွေအတွက်တော့ မြန်မြန်လေးသာ Booking လုပ်ထားလိုက်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
အခုလိုခရစ္စမတ်နဲ့ နှစ်သစ်ကူးကာလမှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုထုတ်ဖော်ပြတဲ့အနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေ မိသားစုတွေကို လက်ဆောင်ပေးဖို့ စဉ်းစားထားတဲ့သူတွေအတွက်လည်း ဆီဒိုးနားဟိုတယ်ရဲ့ ထူးခြားလက်ဆောင်ခြင်းလေးက ရွေးခြယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လက်ဆောင်ခြင်းလေးဟာဆိုရင် မြန်မာရိုးရာအငွေ့အသက်ကို အပြည့်အဝရရှိစေမယ့် ကြိမ်ခြင်းအမျိုးအစားကိုအသုံးပြုထားပြီး La Grande Merlot red wine၊ Hardys sparkling wine၊ ခရစ္စမတ်ချောကလက်ကိတ်၊ ဂျင်းအနံ့သင်းသင်းလေးနဲ့ Gingerbread house၊ သစ်သီးစုံကိတ်၊ သီးစုံပေါင်မုန့် ၊Mixed Nuts၊ ပိုင်မုန့်၊ ကွက်ကီး၊ ချောကလက် praline စတဲ့ အမျိုးအစားစုံစုံလင်လင်နဲ့ မုန့်တွေအများကြီးပါဝင်တဲ့ လက်ဆောင်ခြင်းလေးကိုမှ USD 88 nett တည်းဖြင့်ဝယ်ယူပြီး ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေကို လက်ဆောင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အစားအသောက်ကောင်းကောင်းလေးတွေသုံးဆောင်ပြီး ခရစ္စမတ်နေ့လေးကို ဖြတ်သန်းချင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်း ဆီဒိုးနားဟိုတယ် Orzo Italian Restaurant ရဲ့ အရသာရှိလှတဲ့ ဟင်းလျာတွေကို တစ်ယောက်လျှင် 38 USD nett ဖြင့် သုံးဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကဟင်းပွဲအနေနဲ့ကတော့ Kitchen အတွက် စိန်တစ်ပွင့်လို့တောင်တင်စားရတဲ့ Truffle မှိုဆော့စ်နဲ့ကင်ထားတဲ့ အမဲမိုးခိုသားကိုမှ အသီးအရွက်အစုံနဲ့ တွဲဖက်သုံးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပုစွန်ဝက်ပေါင်ခြောက်ကို ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေပါဝင်တဲ့ Mustard နဲ့ ပျားရည်တို့ဖြင့်အလှဆင်ထားတဲ့ Appetizer နဲ့ တွဲဖက်သုံးဆောင်ရမှာဆိုတော့ တကယ့်ကိုပြည့်စုံတဲ့ Dinner လေးဖြစ်မယ်ဆိုတာ အသေအချာပါပဲ။ အမဲသားမစားတဲ့သူတွေအတွက်လည်း ပင်လယ် cod ငါးကို အီတလီစတိုင် ပင်လယ်စာဆော့စ်လေးနဲ့ တွဲဖက်သုံးဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆီဒိုးနားဟိုတယ်ရဲ့ D’Cuisine Restaurant မှာ Christmas buffet သုံးဆောင်ချင်သူတွေအတွက်လည်း ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်မှာ Christmas eve buffet dinner ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့မှာတော့ Christmas day buffet brunch နဲ့ Christmas day buffet dinner တို့ကို လူကြီးတစ်ယောက်လျှင် 38USD ၊ ကလေးတစ်ယောက်လျှင် 19USD ဖြင့် သွားရောက်သုံးဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ္စမတ်နဲ့ နှစ်သစ်ကူးအချိန်အခါလေးမှာ ချစ်ရတဲ့မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း မိသားစုတွေနဲ့ ပျော်စရာအမှတ်တရတွေ အတူတူဖန်တီးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ တစ်နေရာထဲမှာအားလုံးပြည့်စုံတဲ့ ဆီဒိုးနားဟိုတယ်ရဲ့ စပယ်ရှယ် package တွေက အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်တာကြောင့် အမြန်ဆုံး Booking လုပ်ထားလိုက်ပါနော်။
၂၀၁၉ ခုနှဈရဲ့နောကျဆုံးလထဲကို ရောကျရှိလာပွီဆိုတော့ ခရစ်စမတျနဲ့ နှဈသဈကူးအငှအေ့သကျတှကေို စတငျခံစားလာရပါပွီ။ နှဈဟောငျးကိုနှုတျဆကျ နှဈသဈကိုကွိုဆိုတဲ့ အခုလိုအခြိနျလေးဟာ ကိုယျခဈြရတဲ့သူတှနေဲ့အတူတူ ပြျောစရာအမှတျတရတှကေိုဖနျတီးဖို့ အခြိနျအခါကောငျးလေးဆိုလညျး မမှားပါဘူး။ ပွီးခဲ့တဲ့တဈနှဈတာလုံး အလုပျတှနေဲ့ ပငျပနျးခဲ့ရသမြှ အခုလိုနှဈကူးအကွိုအခြိနျလေးမှာ အကောငျးဆုံးအနားယူရငျး နှဈသဈကိုကွိုဆိုဖို့ စဉျးစားထားတယျဆိုရငျတော့ တဈနရောထဲမှာပဲပွီးပွညျ့စုံတဲ့ ခံစားမှုမြိုးရရှိစမေယျ့ ဆီဒိုးနားဟိုတယျရဲ့ ထူးခွားတဲ့ Christmas and New Year Packages အစီအစဉျလေးတှနေဲ့ မိတျဆကျပေးပါရစေ။
တဈနှဈထကျတဈနှဈ ပိုမိုထူးခွားတဲ့ ခရစ်စမတျနဲ့နှဈသဈအကွိုအစီအစဉျတှကေို ဖနျတီးပေးလရှေိ့တဲ့ ဆီဒိုးနားဟိုတယျမှာတော့ ယခု ၂၀၁၉ ခုနှဈအတှကျ Christmas Magic2Nights Stay Package နဲ့ Twenty Twenty! New Year Eve Package လေးတှနေဲ့အတူ တခွား ထူးထူးခွားခွား အစီအစဉျလေးတှကေို ဧညျ့သညျတျောတှအေတှကျ စီစဉျပေးထားပါတယျ။ ပထမဆုံးအနနေဲ့ မမနေို့ငျစရာ ခရစ်စမတျအမှတျတရတှကေို ဖနျတီးနိုငျဖို့ ဒီဇငျဘာ၂၄ မှ ၂၆ ရကျအတှငျး ၂ ရကျတာ အနားယူနိုငျမယျ့ Christmas Magic2Nights Stay Package အစီအစဉျရဲ့ ထူးခွားမှုလေးတှကေို ပွောပွပေးခငျြပါတယျ။
Christmas Magic2Nights Stay Package လေးမှာဆိုရငျ ဆီဒိုးနားဟိုတယျရဲ့ Garden Wing နဲ့ Inya Wing တို့မှာ အပနျးဖွအေနားယူရမှာဖွဈပွီး လူကွီး ၂ ယောကျ အသကျ ၆ နှဈအောကျ ကလေး ၂ ယောကျအတှကျ D’Cuisine မှာ မနကျစာ Buffet သုံးဆောငျခှငျ့, ဒီဇငျဘာ၂၅ ရကျနမှေ့ာလညျး Orzo Italian သို့မဟုတျ D’Cuisine တို့မှာ ညစာသုံးဆောငျခှငျ့ရရှိဦးမှာဖွဈပွီး ခရစ်စမတျညရဲ့ ထူးထူးခွားခွာအလှဆငျထားတဲ့ မီးရောငျစုံအောကျမှာ အနားယူအပနျးဖွရေငျး ဓာတျဖမျးနိုငျဦးမှာပါ။ ဒါ့အပွငျ အခနျးထဲအရောကျပို့ဆောငျပေးမယျ့ ခရစ်စမတျကိတျလှလှလေးကိုလညျး သုံးဆောငျနိုငျမှာဖွဈသလို Free Wifi အပွငျရကေူးကနျနဲ့ Gym အသုံးပွုခှငျ့တို့ကိုလညျး ရရှိဦးမှာပါ။
မနကျ ၁၀ နာရီမတိုငျခငျ check-in ဝငျမယျဆိုရငျ နောကျတဈနေ့ နလေညျ ၃ နာရီအထိ တညျးခိုခှငျ့ရှိတာဆိုတော့ အေးအေးဆေးဆေးအနားယူအပနျးဖွခေငျြသူတှအေတှကျတော့ ကှကျတိပါပဲ။ အပျေါမှာပွောခဲ့တဲ့ ထူးထူးခွားခွား အစီအစဉျတှအေားလုံးပါဝငျတဲ့ Package ကိုမှ တဈရကျလြှငျ MMK 153,450 ++ သို့မဟုတျ US$99++ က စတငျတညျးခိုနိုငျမှာဖွဈပွီး Garden Wing Package (Deluxe Poolview) အတှကျက US$ 99++ သို့မဟုတျ MMK 153,450++ နဲ့ Inya Wing Package (Premier Room)အတှကျကိုတော့ US$ 115++ သို့မဟုတျ MMK 178,250++ ဆိုပွီး ရှေးခယျြစရာတှလေညျးရှိသေးတာဆိုတော့ လာရောကျအနားယူအပနျဖွမေယျ့ ဧညျ့သညျတျောတှေ စိတျကွိုကျရှေးခယျြနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
နောကျထပျ Twenty Twenty! New Year Eve Package လေးကတော့ နှဈသဈအကွိုအတှကျ ဆီဒိုးနားဟိုတယျရဲ့ Deluxe Lake View သို့မဟုတျ Premier room မှာ မနကျစာဘူဖေးအပွငျ New Year Party လကျမှတျမြားနဲ့ တခွားသောထူးခွားတဲ့ အစီအစဉျမြားစှာဖွငျ့ ဒီဇငျဘာ ၃၁ ရကျနမှေ့ ဇနျနဝါရီ ၁ ရကျနအေ့တှငျး ၂ ရကျတာ အနားယူအပနျးဖွနေိုငျမယျ့ အစီအစဉျလေးပဲဖွဈပါတယျ။ မနကျစာ Buffet ကိုတော့ D’Cuisine နဲ့ ဇနျနဝါရီ ၁ ရကျနမှေ့ာ အခနျးရောကျပို့ဆောငျပေးမယျ့ American Breakfast တို့လညျး ပါဝငျမှာဖွဈပါတယျ။ ဒီဇငျဘာ ၃၁ ရကျနမှေ့ာ Sparkling Wine တဈလုံး လကျဆောငျရရှိဦးမှာဖွဈပွီး ဆီဒိုးနားဟိုတယျရဲ့ Sedona Entertainment Arena မှာ ပွုလုပျမယျ့ နှဈသဈကူး Countdown ပါတီအတှကျ လကျမှတျတှကေိုလညျး ရရှိမှာဖွဈပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ Wifi Free ရကေူးကနျနဲ့ Gym အသုံးပွုခှငျ့တှကေိုလညျး ထပျမံရရှိမှာဖွဈသလို မနကျ ၁၀ နာရီမတိုငျခငျ check-in ဝငျမယျဆိုရငျ နောကျတဈနေ့ ညနေ ၃ နာရီအထိ တညျးခိုအနားယူနိုငျမှာပါ။ အဆိုပါ အစီအစဉျတှအေားလုံးပါဝငျတဲ့ Garden Wing Package (Deluxe Lakeview)ကိုမှ တဈရကျလြှငျ $120++ (single) နဲ့ $170++ (double) သာကသြငျ့မှာဖွဈပွီး Inya Wing Package (Premier Room) အတှကျကိုတော့ တဈရကျလြှငျ $132++ (single) နဲ့ $185++ (double) ဖွငျ့ တညျးခိုအပနျးဖွနေိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
Christmas Magic2Nights Stay Package နဲ့ Twenty Twenty! New Year Eve Package နှဈခုစလုံးမှာမှ Inya Wing Package ကို ဝယျယူမယျ့သူတှအေတှကျ ပိုပွီးထူးခွားတဲ့အစီအစဉျအနနေဲ့ အခနျး laundry service , သီးသီးသနျ့သနျ့အနားယူခငျြသူတှအေတှကျ အခနျးတှငျး Private Bar နဲ့ မနကျ ၁၀ နာရီမတိုငျခငျ check-in ဝငျမယျဆိုရငျ နောကျတဈနေ့ ညနေ ၆ နာရီအထိ တညျးခိုအပနျးဖွခှေငျ့တှကေို ထပျမံရရှိမှာဖွဈပါတယျ။ Christmas Magic2Nights Stay Package လေးကိုတော့ လကျရှိအခြိနျကစပွီး ဒီဇငျဘာ ၂၅ ရကျနမေ့တိုငျခငျအထိ ရောငျးခပြေးသှားမှာဖွဈပွီး Twenty Twenty! New Year Eve Package ကိုတော့ အခုခြိနျကစပွီးလာမယျ့ ၃၀ ရကျနအေ့ထိ ရောငျးခပြေးသှားမှာဆိုတော့ ခရစ်စမတျနှငျ့ နှဈသဈကူးအကွိုကို အကောငျးဆုံးဖွတျသနျးခငျြသူတှအေတှကျတော့ မွနျမွနျလေးသာ Booking လုပျထားလိုကျဖို့ တိုကျတှနျးခငျြပါတယျ။
အခုလိုခရစ်စမတျနဲ့ နှဈသဈကူးကာလမှာ ခဈြခွငျးမတ်ေတာကိုထုတျဖျောပွတဲ့အနနေဲ့ ကိုယျ့ရဲ့လုပျဖျောကိုငျဖကျမိတျဆှသေူငယျခငျြးတှေ မိသားစုတှကေို လကျဆောငျပေးဖို့ စဉျးစားထားတဲ့သူတှအေတှကျလညျး ဆီဒိုးနားဟိုတယျရဲ့ ထူးခွားလကျဆောငျခွငျးလေးက ရှေးခွယျစရာတဈခုဖွဈပါတယျ။လကျဆောငျခွငျးလေးဟာဆိုရငျ မွနျမာရိုးရာအငှအေ့သကျကို အပွညျ့အဝရရှိစမေယျ့ ကွိမျခွငျးအမြိုးအစားကိုအသုံးပွုထားပွီး La Grande Merlot red wine၊ Hardys sparkling wine၊ ခရစ်စမတျခြောကလကျကိတျ၊ ဂငျြးအနံ့သငျးသငျးလေးနဲ့ Gingerbread house၊ သဈသီးစုံကိတျ၊ သီးစုံပေါငျမုနျ့ ၊Mixed Nuts၊ ပိုငျမုနျ့၊ ကှကျကီး၊ ခြောကလကျ praline စတဲ့ အမြိုးအစားစုံစုံလငျလငျနဲ့ မုနျ့တှအေမြားကွီးပါဝငျတဲ့ လကျဆောငျခွငျးလေးကိုမှ USD 88 nett တညျးဖွငျ့ဝယျယူပွီး ကိုယျခဈြတဲ့သူတှကေို လကျဆောငျပေးနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
အစားအသောကျကောငျးကောငျးလေးတှသေုံးဆောငျပွီး ခရစ်စမတျနလေ့ေးကို ဖွတျသနျးခငျြတဲ့သူတှအေတှကျလညျး ဆီဒိုးနားဟိုတယျ Orzo Italian Restaurant ရဲ့ အရသာရှိလှတဲ့ ဟငျးလြာတှကေို တဈယောကျလြှငျ 38 USD nett ဖွငျ့ သုံးဆောငျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ အဓိကဟငျးပှဲအနနေဲ့ကတော့ Kitchen အတှကျ စိနျတဈပှငျ့လို့တောငျတငျစားရတဲ့ Truffle မှိုဆော့ဈနဲ့ကငျထားတဲ့ အမဲမိုးခိုသားကိုမှ အသီးအရှကျအစုံနဲ့ တှဲဖကျသုံးဆောငျရမှာဖွဈပါတယျ။ ပုစှနျဝကျပေါငျခွောကျကို ဟငျးခတျအမှေးအကွိုငျတှပေါဝငျတဲ့ Mustard နဲ့ ပြားရညျတို့ဖွငျ့အလှဆငျထားတဲ့ Appetizer နဲ့ တှဲဖကျသုံးဆောငျရမှာဆိုတော့ တကယျ့ကိုပွညျ့စုံတဲ့ Dinner လေးဖွဈမယျဆိုတာ အသအေခြာပါပဲ။ အမဲသားမစားတဲ့သူတှအေတှကျလညျး ပငျလယျ cod ငါးကို အီတလီစတိုငျ ပငျလယျစာဆော့ဈလေးနဲ့ တှဲဖကျသုံးဆောငျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
ဆီဒိုးနားဟိုတယျရဲ့ D’Cuisine Restaurant မှာ Christmas buffet သုံးဆောငျခငျြသူတှအေတှကျလညျး ဒီဇငျဘာ ၂၄ ရကျမှာ Christmas eve buffet dinner ဒီဇငျဘာ ၂၅ ရကျနမှေ့ာတော့ Christmas day buffet brunch နဲ့ Christmas day buffet dinner တို့ကို လူကွီးတဈယောကျလြှငျ 38USD ၊ ကလေးတဈယောကျလြှငျ 19USD ဖွငျ့ သှားရောကျသုံးဆောငျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ ခရစ်စမတျနဲ့ နှဈသဈကူးအခြိနျအခါလေးမှာ ခဈြရတဲ့မိတျဆှသေူငယျခငျြး မိသားစုတှနေဲ့ ပြျောစရာအမှတျတရတှေ အတူတူဖနျတီးခငျြတယျဆိုရငျတော့ တဈနရောထဲမှာအားလုံးပွညျ့စုံတဲ့ ဆီဒိုးနားဟိုတယျရဲ့ စပယျရှယျ package တှကေ အသငျ့တျောဆုံးဖွဈတာကွောငျ့ အမွနျဆုံး Booking လုပျထားလိုကျပါနျော။
MyStyle Myanmar2019-12-12T13:32:31+06:30December 12th, 2019|Lifestyle|